Vaovao - Didim-panamboarana Belated amin'ny jiro miasa
Rehefa milaza ny mpanjifa vahiny fa tsy mbola nividy ny jiro fiasanao aho, azo itokisana ve ny kalitaony? Na lavitra anao loatra aho. Inona no tokony hataoko raha misy olana amin'ny kalitao?
Ny varotra rehetra, amin'izao fotoana izao, dia hilaza aminao fa ny vokatray no tsara indrindra. Fa tena mino azy ireo ve ianao?
Amin'ny maha-mpanamboatra maivana ny jiro miasa izay nandray anjara lalina tamin'ny sehatry ny fitsaboana nandritra ny 20 taona, afaka milaza aminao izahay amin'ny angon-drakitra fiderana ataon'ny mpampiasa eto an-toerana sy any ivelany, azafady matokia anay.
Volana vitsivitsy lasa izay, nahazo mailaka tamin'ny mpanjifa izahay. Ny mpanjifa dia nividy ny jironay LED tamin'ny taona 2013. Hatramin'izay dia mbola tsy nisy fangatahana fanamboarana.
Na izany aza, satria manakaiky ny fetrany tokoa ny androm-piainan'ny birao PCB, dia nanapa-kevitra ny hanoratra aminay izy ireo mba hanamboarana kojakoja vaovao.
Nanomboka ny taona 2013 ka hatramin'ny 2020 dia 7 taona no niandrasanay io baiko fanamboarana io.
Faly be izahay mandray ity mailaka ity. Taloha dia nifikitra hatrany amin'ny tsipika kalitao izahay ary niezaka nanao vokatra avo lenta. Manavao tsy tapaka ny firafitry ny vokatra sy ny famolavolana izahay nefa tsy miditra amin'ny ady vidiny. Ankehitriny, ny vokatray dia efa ampiasain'ny mpanjifa efa an-taonany maro. Ankehitriny dia mbola mividy kojakoja ny mpanjifa ary manohy mampiasa azy ireo. Ampy izay ny mahita fa ny fikirizantsika tena misy dikany.
Any Sina, manana mpanjifa marobe izay matoky tanteraka ny kalitaonay izahay. Taorian'ny fahanteran'ny jiro miasa, rehefa mividy hazavana vaovao dia mbola manome ny laharam-pahamehana ny marika izahay. Na, rehefa mifindra amin'ny tranokala vaovao ny hopitaly taloha, dia mbola mangataka aminay ihany izy ireo hanampy azy ireo hanala ilay jiro fandidiana taloha ary hametraka azy io amin'ny hopitaly vaovao.
Feno fankasitrahana izahay noho ny fanohanan'ireo mpampiasa ireo, ary azo antoka fa hanohana ny fanahin'ny fanetren-tena izahay, hihaino tsara ny filan'ny mpanjifa, hanohy hanatsara ny vokatra ary hanaraka ny fotoana.